Turkiga oo ka hadlay arrimo ku saabsan ciidamada Soomaaliya oo xasaasi ah ‘warbixin’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Turkiga oo ka hadlay arrimo ku saabsan ciidamada Soomaaliya oo xasaasi ah...
Turkiga oo ka hadlay arrimo ku saabsan ciidamada Soomaaliya oo xasaasi ah ‘warbixin’
Xorriya Online: Dowladda Turkiga ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadashay warar iyo warbixinno maalmahaan aad loo hadal hayey, kuwaas oo lagu qorayey website-yada qaar iyo baraha bulshada xiriirto oo sheegayey in Turkiga uu wado qorsho ciidamo Soomaali ah loogu diraayo dalka Libya si ay taageero u siiyaan dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dagaalka kula jirto hoggaamiyaha macangagga ah ee General Khaliifa Xaftar.
Danjiraha Turkiga ee Sooomaaliya, Mehmet Yilmaz.
Danjiraha Turkiga ee Sooomaaliya, Mehmet Yilmaz oo wareysi siiyey wakaaladda wararka Anadolu Agency, ayaa sheegay inaysan jirin in dowladda Turkiga ay dowladda Soomaaliya weydiisatay ciidan Soomaali ah oo la geeyo Libya.
Hadalka safiirka ayaa ka dambeeyey warar iyo warbixinno ay qoreen website-yo taageero general fallaagada ku noqday oo dagaalka kula jiro dowladdisa. Website lagu magacaabo Libya Review ayaa markii ugu horreyey billaabay baahinta warkaan beenta ah ee lagu ceebeynayo ciidamada Soomaalida ah, lana doonayo in shacabka Soomaaliyeed sawir qaldan laga tuso dowladda Turkiga.
Safiirka Turkiga oo sii hadlayo ayaa yiri, “Waxaa jiro wadamo u caawinaayo Soomaaliya si danahooda u gaaraan, balse Turkiga waxuu u caawiyaa in Soomaaliya soo kabato, isku fillaansho gaarto; wararka labaahiye waa kuwo aan sal iyo baar laheyn, waxaa laga leeyahay ujeedooyin”, “Waxa wararkaan faafinaayo waa dalal cadow ku ah Turkiga, kana xun xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeyo Soomaaliya iyo Turkiga”
Horay ayaa arrintaan waaa uga hadlay dowladda Soomaaliya, iyada oo ku tilmaamdey warar been ah oo aan loo meel dayin.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in aysan jirin ciidamo Soomaali ah oo ku sugan Libya iyo in uusan jirin qorshe ciidamo Soomaali laagu diraayo dalkaas. Iyo in aysan jirin wada hadal arrintaan ku saabsan oo ay wada yeeshen dowladda Turkiga.
Wasiirka ayaa sheegay in ciidamda Soomaaliya aysan aheyn calooshood u shaqeystayaal lagu fushado arrimo iyo dano gaar ah.
Turkiga ayaa Soomaaliya ku leh saldhigga militari ee ugu weyn uu ka sameystay meel ka baxasan dalkiisa. Saldhiggaan ayaa waxaa lagu tababar heerkiisu sarreyo lagu siiyaa sarakiil iyo askar Soomaali. Waxaana lagu tilmaay in uu qeyb weyn ka qaadan doono dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamda Soomaaliya.
Ciidamda iyo saraakiisha ku soo qaato tababarka saldhigaan ayaa ah kuwo tayada iyo xirfadda wanaagsan ciidamada Soomaaliya. Guuto kasto oo ka soo qalin jibiso saldhiggaan ayaa waxey Turkiga siiyaan hub casri ah iyo baabuur militari.
Saldhigga TurkiSom ee magaalada Muqdisho
Turkiga ayaa sidoo kale Soomaaliya ku leh safaaradda ugu weyn uu dal ka furtay. Safaaddaan ayaa shacabka Soomaaliyeed u fududeeysay helista dal ku galka Turkiga. Waxaa visa ka qaato ardeyda, dadka xanuunsan, ganacsatada iyo dadka rabo in ay u dalxiis dagaan Turkiga.
Xiriirka ka dhaxeeyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ah mid aad u wanaagsan marba marka ka dambeysana sii xoogeysanaayo. Xiriirkaan ayaa waxaa si weyn uga xumaaday dalal badan ee ay ugu horreyaan wadabo Carbeed, qaar Afrikaan ah iyo kuwo Yurub ah.